thinzar's blog: My new toy
5GB ? It is not gonna last even one week for me ...
10/4/09 6:28 PM
trh>> yeah.. 5GB is too limited.. But since I'm using it only on weekends, and I don't do much downloads, so, it's just enough for me.
12/4/09 2:35 PM
ခုနောက်ပိုင်း maxis လိုင်းက
၁ နာရီ RM-2
ကျွန်တော်လက်ရှိ 017 maxis လိုင်းသုံးတယ်
handphone ကတော့ sonnyericsson ပေါ့
maxis center *100# ကိုနှိပ်လိုက်တယ် အဲဒီနောက် ၁နာရီ ၁ရက် ၁လ နှစ်သက်ရာရွေးလိုက်တယ်
၁နာရီကိုရွေးချယ်ရင် ၂ကျပ် စားမှာဖြစ်ပြီး ၁လကိုရွေးချယ်ရင်၆၈ကျပ် ဖုန်းထဲက ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ် ဖုန်းထဲပိုက်ဆံထဲ့ထားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ
အဲဒီလိုတခုခုရွေးချယ်ပြီးသွားရင် ကိုယ်သုံးမဲ့ computer ကို data cable သုံးပြီး ခုန maxis ကဒ်ထည့်ထားတဲ့ ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ဒါဆို internet စသုံးလို့ရပြီ အရမ်းလွယ်ပြီး အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူး အမတွက်မလိုအပ်ရင်လဲ တခြားသူငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြလို့ရတာပေါ့
စိတ်ဝင်စားလို့ အသေးစိတ်သိချင်ရင် gmail account ပေးခဲ့မယ်နော် ကျွန်တော့မှာတော့ အမတို့လို ကိုယ်ပိုင် blog မရှိသေးဘူး
8/1/10 1:58 AM
nayyarthit>> အခုလို ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးဘဲနော်။ အဲဒီနည်းက တော်တော် အဆင်ပြေတယ်နော်။ သူငယ်ချင်းတွေကို အကြံပေးလိုက်ဦးမယ်။ ဒါနဲ့ datable cable နဲ့ သုံးရင် speed က ဘယ်လောက်ရသလဲဟင်? monthly limit ကော ဘယ်လောက်ပါလဲ?
ကျမ စဝယ်တုန်းက maxis က အဲဒီ offer မလုပ်သေးဘူးလေ။ အရင်တစ်နှစ်က ရွေးချယ်စရာလည်း ဘာမှ သိပ်မရှိသေးတော့ အဲဒီ လိပ်ပက်ကျိ speed နဲ့ celcom ဘဲ ဝယ်သုံးလိုက်ရတယ်။ အခု celcom ကို terminate လုပ်ပြီး maxis ရဲ့ youth package(no-device package) ပြောင်းပြီး subscribe လုပ်ထားတယ်။ 3.6Mbps ကို တစ်လ ၄၈ရင်းဂစ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူး။ Modem က ရှိနေပြီးသားဆိုတော့ ဖုန်းကို ဒုက္ခ မပေးတော့ဘူး :)
8/1/10 10:30 AM